Nyocha nke LG G5, ekwentị modulu nwere igwefoto abụọ | Gam akporosis
El LG G5 bụ ekwentị modulu mbụ na ọ dị oke mkpa ịnye ndị ọrụ ikike ndị ọzọ. Otu ama nke ụlọ ọrụ Korea chọrọ iji dọta uche na ụdị ngosi ahụ na profaịlụ dị egwu maka foto site n'inwe igwefoto abụọ na azụ. Igwefoto abụọ a, ma e wezụga nke nkịtị, nwere akụkụ sara mbara nke na-arụ ọrụ dị ukwuu iji weghara foto ezinụlọ ma ọ bụ oghere anụ ahụ ndị na-ewere akụkụ kachasị ukwuu nke foto ahụ nwere ike ịnweta ụlọ niile nke ụlọ ma ọ bụ ihe niile. ubi nke ama egwuregwu bọọlụ.
LG bụ ụlọ ọrụ mbụ ejirila modulu kpọrọ ihe nke ukwuu ma ọ bụ ya mere ị ga-eji were LG G5 gị usoro nke ha nke na-enye gị ohere ịnweta foto ka mma, ọdịyo dị elu ma ọ bụ ụgwọ batrị zuru ezu iji gbanwee ya n'okwu sekọnd LG G5 dị ugbu a onye nke kasị mma igwe na ahịa Ma ọ bụrụ na ọ nwee ike ịgbakwunye ntakịrị batrị, ọ ga-abụ ekwentị zuru oke iji duel abụọ na nnukwu mmalite nke afọ, Galaxy S7. N'ọnọdụ ọ bụla, G5 bụ ekwentị pụrụ iche maka ndị hụrụ foto na ndị chọrọ ka modulu ndị ahụ gbanwee ya ka ọ bụrụ ngwaọrụ nwere àgwà ndị ọzọ na sekọnd.
1 Ekwentị modulu na ekwentị obosara
2.2 Igwefoto ya abuo
5.1 Wide n'akuku
5.2 Ndị dị n'elu
7 Nyocha vidiyo
Ekwentị modulu na ekwentị obosara
LG G5 bụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama nyere onye nrụpụta SDK ka ndị ọzọ nwee ike isonye na atụmatụ ha. Ka anyị kwuo na emeghewo ụzọ nke ọnwa, na ọnwa ndị na-abịanụ, ọ bụrụ na LG na-aga n'ihu ịkụ nzọ na modular, anyị ga-ahụ nzo ndị na-adọrọ mmasị iji nye ndị ọzọ mmetụta na atụmatụ na ekwentị nke dọtara uche dị ukwuu mgbe egosiri ya na Mobile Nzukọ Congresswa.
Ọ bụrụ na ndị na-emepụta Korea Achọrọ m ịbụ etiti nke ọtụtụ okwu nke mere na Barcelona n'oge MWC ahụ, ọ gara nke ọma. Anyị ka kwesịrị ịmata ọdịnihu dị nso maka modulu ndị a na LG Friends, usoro nke ngwa ndị na-abịa otu ebumnuche iji tinyekwuo ahụmịhe na nnukwu ama. N'otu aka, anyị nwere modulu abụọ, LG Cam Plus iji nye atụmatụ ka mma na foto, na batrị n'onwe ya iji kwụọ ya ụgwọ zuru ezu. Ndị enyi LG bụ: LG 360 Cam, LG 360 VR na Hi-Fi Plus tinyere B&O Play. Can nwere ike ịgafe ntinye a iji nweta ozi ndị ọzọ gbasara nke ọ bụla.
Ewezuga akụkụ a nke ọzọ, njimara nke ọzọ kacha gbaa m ume site na mbido bụ nke ya 135 ogo obosara oghere oghere. Inwe ikike a were ụdị foto ndị ahụ na nkasi obi na ịdị nro nke pụtara iwepụta ekwentị gị na sekọnd, bụ ihe m enwetụbeghị na ihe G5 pụtara. Ọ bụ ahụmịhe nke na-enweghị ekwentị ọzọ dị n'ahịa nwere anya nke ụdị a. Ị nwere ike gafere n'ọnụ ụzọ a nwere nlebara anya pụrụ iche na nke a nke ekwentị.
Maka akụkụ ndị ọzọ, anyị na-eche ihu nnukwu ama na enweghị ụdị akwa akwa dị otú a, ihuenyo nwere oke ngwụcha na ngwongwo ọla pụrụ iche nke kwekọrọ na ihe na-eme ugbu a na mpaghara elu nke etiti gam akporo. Arụ ọrụ ị nwetara na ekwentị mgbe anyị na-agagharị na desktọọpụ, ngwa ọdịnala na atụmatụ ndị ọzọ dị mma ma ọ nweghị ihe a ga-ata ụta na ya.
Naanị nkwarụ m na-ahụ bụ batrị, nke na-ada ada ma nke ahụ ọ naghị ata ahụhụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na eji njirimara "mgbe niile" ịnwe elekere na ọkwa mgbe niile iji mara ha. Arụ ọrụ anyị na-ahụ na ekwentị ndị ọzọ dị ka Galaxy S7 na nke ahụ na-enye anyị ohere ịchekwaa ịgbanye ekwentị n'ọtụtụ oge.
Ejiri LG G5 mara a zuru ozu metal imewe nke ọdịdị akụkụ nke akụkụ ahụ na gburugburu nke ogwe ebe anya abụọ ahụ dị, mgbatị ya na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, na-arụ nnukwu ọrụ. G5 nwere mmetụ nke ígwè galvanized nke na-enye mmetụta na aka gị agaghị amị amị.
Igwefoto ya abuo
Ọ bụ ihe ọzọ nke isi igodo ya maka ama nke ị nwere ike iji nweta ya. ma ọ bụrụ na ị na-aga site na ntuziaka akara. Ọ bụrụ na G4 apụtaworị na nke a, anyị nwere ike ịsị na igwefoto LG G5 bụ oge kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri sekọnd ole na ole gbanwee ụkpụrụ. Nchekwa onwe mode na-arụ nnukwu ọrụ, mana Galaxy S7 ihu na-elekwasị anya ọsọ na-etinye ya kacha mma na nke a.
Ma olee ebe ọ bụ Okpueze na ama a ọ nọ n'akụkụ ya sara mbara na ogo 135 na oghere 8MP ya. Ga-achọpụta ụzọ ọzọ ị ga-esi ahụ ụwa gburugburu gị mgbe ịmalitere ule na foto ndị ọzọ. Ọ bụ mmetụta na naanị LG na-akpasu n'oge ahụ, yabụ ọ bụrụ na ihe ị na-ese foto ị nwere ịnyịnya mmeri na G5.
Ọ bụrụ n ’icheghị iwere modulu batrị ọzọ, ị ga - enwe mkpanaka maka nwa oge jiri ya ruo ogologo oge ị chọrọ n’ehihie n’ehihie ịgbanye ọchịchị obodo n’otu oge. Modular ikike bụ ihe ọzọ nke ya isi atụmatụ, ma nke a pụtara ihe outlay maka onye ọ bụla nke modul na ị chọrọ jikọọ ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye foto ntụgharị, ma e wezụga akụkụ ya sara mbara na akụkụ ndị ahụ dị elu, modul foto ga-emepe nhọrọ ndị ọzọ na G5.
Anyị agafeela modulu ahụ, ikike ahụ maka eserese na ọmarịcha mma nke na-etinye ọdụ a na ebe na-adọrọ mmasị, mana na ngwụcha ụbọchị anyị ga-eji ya abanye WhatsApp, netwọkụ mmekọrịta, ngwa egwu, egwuregwu vidio. na ihe na-agagharị na interface ya. N'ikwu ya, LG G5 O nweghi drawer ngwa na launcher site na ndabara, ọ bụ ezie na ọ nwere ụdị dị iche iche nwere atụmatụ a.
Site n'inwe nke ahụ Mkpa ọkụ omenala oyi akwa, ụdị UX 5.0, na nhọrọ ahụ iji chefuo otu n'ime drawer ngwa ahụ, G5 na-enye mmetụta ndị ọzọ mgbe anyị malitere ngwa ma ọ bụ mepee mkpọchi mkpọchi. Ọ na-eji ihe mkpịsị aka mkpịsị aka arụ ọrụ nke ọma ma dị na azụ. Ọ bụ ihe gbasara ịmalite ime ọtụtụ ihe na nhọrọ a.
Na arụmọrụ ndị G5 na-arụ ọrụ dị ukwuu ma mepee ihe niile n'ụzọ ekwensu iji mee ka ngwa igwefoto dị njikere ma see foto n'aka ekpe na aka nri. Dị ka ọ na-enweghị mkpịsị ugodi anụ ahụ, ndị mebere ahụ bụ ndị na-enyere anyị aka ịmegharị zuru oke.
Ọ na-ewute m ma m kwuo ya, mana ekwentị a nwere batrị dị ala. Ọ na-emekwa na V10 na ọ na-ewe iwe mgbe ị nwere ama na ị ga-eji ọtụtụ. Ma ojiji ahụ pụtara na ihe na-erughị ihe ị chere na ị nwere ike ịchịkwa onwe gị. O si na otu ihe ahụ mere na Galaxy S6 nke Samsung nwere igwefoto dị egwu, mana nke a ga-ewepụta ruo mgbe anyị ga-ebugo ya.
Na gam akporo 6.0.1 Marshmallow, G5 na-arụ nnukwu ọrụ na-abaghị uru mgbe dabere na ọnọdụ ụra ahụ nke Google mepụtara n'ụzọ na-egbuke egbuke. Mana ihe ekwuru, ama ama na-eji oge nyocha were foto, gụọ ozi ma ọ bụ kpọọ vidiyo na YouTube, ọ bụkwa ebe a ka anyị nwere nkwarụ nke LG ama a. Olileanya na G6 anyị nwere ike ikwu maka ihe dị iche ma weta ihe karịrị ndị 2.800 mAh.
LG G5 nwere 16 MP n'azụ igwefoto f / 1.8 oghere na oghere ọkọlọtọ na oghere 8MP f / 2.4 na oke obosara. O nwere akpaka autofocus, OIS, flash flash ma nwee ike ịdekọ vidiyo na 2160p na 30 FPS na 1080p / 30 Fps. Na igwefoto dị n'ihu anyị nwere ike ikwu maka oghere 8MP, f / 2.0 na ndekọ vidiyo 1080p.
Foto ndị dị n'okpuru belata na mkpebi nke 1600 × 900. Enweela m ọkwá dị elu karị na foto abalị, nke ikpeazụ bụ ebe ndị ka ukwuu n'ime ndị nrụpụta na-etinyesi ike.
Ama nke nwere Qualcomm Snapdragon 820 mgbawa, GPU Adreno 530 na RAM nke 4 GB. Site na ndabara ọ nwere 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime na ikike ịgbakwunye kaadị microSD. Ya mere, anyị nwere oge kachasị mma iji wepụta ụdị ọdịnaya dị iche iche.
Soundda ụda dịkwa mma ma nwee oke nkọwa na nkwupụta okwu na-esote njikọ USB Type-C. Ihuenyo, ọ bụ ezie na ọ nweghị àgwà nke nchapụta nke nke Galaxy S7, nwere ezigbo nlele nlele anya na anyị nwere ike ịsị na ọ dị oke elu na nke a. Nchikota a nke oma na ezigbo ihuenyo na-eduga anyi igwu egwu di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche. Ekwesiri ighota na Adreno 530 GPU putara ihe itu ukwu na ogo ihe na arụmọrụ karia nke Snapdragon 810, ya mere enwere ike igwu egwuregwu vidio anyi gha achoputa n'enweghi nsogbu site na ekwentị a.
LG G5 na-akpọ ọkụ. M na-ekwu ọnụma maka obi nkoropụ nke nwere ike ịkpata site na batrị na ọ bụ ezie ọ gafere 3 na ọkara awa nke ihuenyoỌ na-enye mmetụta na ka anyị na-eji ekwentị, anyị agaghị abata n'ehihie na mgbede anyị ga-elele akara ngosi batrị na ogwe ọnọdụ na-elebara anya nke ekwesịghị ịdị ka nke ahụ, na ndị ọzọ site na njedebe dị elu ngwaọrụ.
Maka ndị ọzọ, LG flagship bụ nnukwu ekwentị ma ọ na-egosi nke ahụ ha etinyewo ịhụnanya ha n'ime ya ịnye ihe dị iche na njedebe nke afọ a. Ọ na-esiri ike ijide uche nke ndị na-ege ntị mgbe anyị nwere nnukwu Huawei P9, nke dị egwu Galaxy S7, HTC 10 nke na-adịghị njọ ma ọlị na ekwentị ndị ọzọ ga-achọ obi abụọ nke ndị ahịa n'ọdịnihu ka ha wee kpebie na ha mobiles; Ana m ekwu banyere Xiaomi Mi 5, na-enweghị ike imeri na ọnụahịa ya ruo mgbe OnePlus 3 rutere.
G5 nwere obere aka ya ma ha mere ya pụrụ iche. Igwefoto ya abuo, ihe nlere anya na oru di elu n’iile àgwà atọ ọ ga-eji joụrịa nye ọtụtụ ndị ọrụ, dị ka onye na-ede na ha hụrụ foto ahụ n'anya yana akụkụ ya sara mbara. Ọzọ ama na-ada na ịhụnanya.
Igwefoto ya abuo nwere obosara di iche nke 135 degrees
Mọdụl ya iji gbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na foto na ụda
Ọdịdị ọla ya pụrụ iche
Ihuenyo ya "Na-adị mgbe niile" na-azọpụta ka ịgbanwuo ọnụ iji mara oge na ọkwa
A gaara m agbanwe modul batrị ọzọ maka nnwere onwe ka ukwuu
Oge na-adị nwa oge na nlele ihu na foto abalị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Anyị na-enyocha LG G5, smartphone nwere modular nwere nnukwu profaịlụ maka foto
A na - akpọ onye ahịa Telegram kacha mma gbakwunyere Plus Messenger ma ọ bụ n'efu !!